Joany apostoly - Wikipedia
I Joany na Jaona na Jôhany dia isan'ireo mpianatr'i Jesoa (na Jesosy) roa ambin'ny folo lahy. Atao hoe Joany zanak'i Zebedio koa izy sady rahalahin'i Jakoba zanak'i Zebedio. Mpanjono ny asany. Misy ny mpandinika mihevitra fa i Joany apostoly dia tsy iza fa i Joany evanjelista ihany. Ao koa anefa ireo mandà izany. Fanampin'izany dia heverin'iretsy farany fa tsy olon-tokana no nanoratra ny Filazantsaran'i Jaona.
2 I Joany apostoly araka ny Baiboly
2.1 Araka ireo Filazantsara sinoptika
2.2 Araka ny Asan'ny Apostoly
2.3 I Joany apostoly sy ny Filazantsaran'i Joany
3 Ireo soratra lazaina fa asan-tanan'i Joany apostoly
Atao hoe Ἰωάννης / Iôannês io anarana io amin'ny teny grika, יהוחנן / Yehohānan kosa amin'ny teny hebreo fa ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ / Yohanan Shliha kosa amin'ny teny arameana. Ataon'i Jesoa hoe Boanerges izy sy i Jakoba rahalahiny.
I Joany apostoly araka ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]
Araka ireo Filazantsara sinoptika[hanova | hanova ny fango]
Ao amin'ny Evanjely sinoptika i Joany dia isan'ireo mpianatr'i Jesoa voatanisa aloha (Mar. 3.16-19; Mat. 10.2-5; Lio. 6.13-16) miaraka amin'i Jakoba Zokiny.
Mpanjono ao amin'ny farihy Tiberiada (na Tiberiasy na Galilia na Genesareta) izy nefa nandao ny haratony fa hanaraka an'i Jesoa sahala amin'i Petera sy i Andrea (Mar. 1.16-20; Mat. 4.18-22; Lio. 5.1-11). Araka ny Evanjelin'i Marka dia nomen'i Jesoa ny anarana hoe Boanergesy ("zana-baratra") izy sy i Jakoba rahalahiny (Mar. 3.17).
I Petera sy i Jakoba ary i Joany dia niaraka tamin'i Jesoa teo an-tendrombohitra tamin'ny fotoan'ny fiovan-tarehy (Mar. 9.2; Mat. 17.1; Lio. 9.28).
I Joany dia isan'ireo mpianatra niaraka tamin'i Jesoa tamin'ny fanasitranana ny renin'i Petera (Mar. 1.29) sy ny fanasitranana ny zanakavavin'i Jairo lehiben'ny sinagoga (Mar. 5.37; Lio. 8.51).
I Joany dia niditra an-tsehatra tamin'ny anaran'ireo mpianatra izay nisakana olona hanao fahagagana amin'ny anaran'i Jesoa (Mar. 9.38; Lio. 9.49)
I Jakoba sy i Joany, izay samy zanak'i Zebedio, dia nangataka ny mba hipetraka eo akaikin'i Jesoa rehefa tonga amin'ny voninahiny i Jesoa ka nahatezitra ny mpianatra sisa izany (Mar. 10.35-45).
I Petera sy i Jakoba ary i Andrea dia nanontany an'i Jesoa teo amin'ny Tendrombohitra Oliva (Mar. 13.3) ary nanambara tamin'i Petera sy i Jakoba ary i Joany ny fanahiany i Jesoa (Mar. 14.33).
Araka ny Asan'ny Apostoly[hanova | hanova ny fango]
"Ary rehefa tafiditra izy, dia niakatra ho any an-trano ambony, izay fitoerany, - dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak'i Alfeo, sy Simona Zelota ary Jodasy, zanak'i Jakoba" (Asa 1.13).
Nanatrika ny nanasitranan'i Petera lehilahy malemy tongotra mpipetraka eo amin'ny vavahady Itsaraendrika fidirana ao amin'ny Tempoly i Joany teo amin'ny vavahady ka nidera an'Andriamanitra. Nahavory vahoaka betsaka izy ireo tamin'izany (Asa 3.1-11).
Nisambotra an'i Petera sy an'i Joany ny mpisorona be sy ny Sadoseo noho izy ireo nanao fahagagana tamin'ny anaran'i Jesoa ka nitondra azy teo anatrehan'ny Sinedriona (Asa 4.1-19).
Nalefa tany Samaria izay efa nitoriana ny filazantsara i Petera sy i Joany ka nametra-tanana tamin'ny olona mba hilatsahan'ny Fanahy Masina (Asa 8.14-25).
I Joany apostoly sy ny Filazantsaran'i Joany[hanova | hanova ny fango]
Ny tsy fahitana ao amin'ny Evanjelin'i Joany ireo sombin-tantara andraisan'i Joany zanak'i Zebedio anjara ao amin'ny Evanjely sinoptika, toy ny fananganan-ko velona ny zanakavavin'i Jairo na ny fiovan-tarehy teny an-tendrombohitra, dia mampanontany tena ny amin'i Joany avanjelista.
Ireo soratra lazaina fa asan-tanan'i Joany apostoly[hanova | hanova ny fango]
Ny lovantsofina kristiana dia manao an'i Joany apostoly ho nanoratra ny Evanjelin'i Joany. Izany lovantsofina izany dia mampitovy an'ilay "mpianatra tian'i Jesoa" amin'i Joany avanjelista. Lazaina koa fa i Joany apostoly no nanoratra ireo boky mamorona ny atao hoe "tahirin-tsoraratr'i Joany", dia :
ny Evanjely araka an'i Joany,
ny Taratasy voalohany nosoratan'i Joany,
ny Taratasy faharoa nosoratan'i Joany,
ny Taratasy fahatelo nosoratan'i Joany,
ny Apokalipsin'i Joany.
Mpikaroka maro anefa no manohitra ny maha nanoratra evanjely an'i Joany apostoly sy ny maha olon-tokana ny nanoratra ireo boky ao amin'ny tahirin-tsoratr'i Joany. Ny mpahay tantara sasany dia milaza fa ny nanoratra ny Evanjelin'i Joany dia i Joany Zokiny nefa tsy eken'ny mpikaroka hafa izany.
Joany mpanoratra epistily
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Joany_apostoly&oldid=977446"
Voaova farany tamin'ny 19 Novambra 2019 amin'ny 19:30 ity pejy ity.